Mahadum Karamanoğlu Mehmetbey ga-akpọ ndị ọrụ agụmakwụkwọ; A ga-eweghachi ngalaba ndị a site na Rectorate nke Karamanoğlu Mehmetbey Mahadum n'usoro ndị dị mkpa nke Iwu agụmakwụkwọ dị elu ọnụ ọgụgụ 2547 na Iwu nke Nhọpụta na Nkwalite nke Ndị Ọzụzụ Mmụta.
Onu ogugu: 20
Rebọchị Mwepụta Gazette Official: 05.12.2019
Oge Ngwa: ụbọchị nke iri na ise nke ọkwa dị ka ụbọchị a ga-ebipụta ya bụ njedebe nke awa ọrụ.
unit ngalaba Ngalaba ibe Aha Squad ogo Nkowasi
na Schoollọ Akwụkwọ Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Njikwa Egwuregwu 1 osote prọfesọ 1 Inwe aha nke prọfesọ na-arụ ọrụ na ngalaba nke sayensị sayensị na ịrụ ọrụ na nkwukọrịta na ime mkpebi na egwuregwu.
Ngalaba Akwụkwọ edemede Asusu Bekee na Akwukwo Asusu Bekee na Akwukwo 1 Dr. Nkụzi. otu 5 Inwe ọmụmụ ihe na tempolọ ihe nkiri nka nke oge a.
Ngalaba nke Economics and Administrative Sciences ọrụ Nlekọta na nhazi 1 osote prọfesọ 1 Bebụ onye prọfesọ na - arụ ọrụ na ngalaba nke njikwa na atụmatụ, ịrụ ọrụ na ngalaba nke atụmatụ njikwa, okike na nchịkwa ụlọ ọrụ.
Ngalaba nke Injinia Injin Energy Energy Sistemụ Ike Mmegharị 1 osote prọfesọ 1 Soro prọfesọ na ngalaba nke sistemụ sistemu ume na ọmụmụ ike anyanwụ na arụmọrụ ike ga-eme.
Ngalaba nke Injinia Ọdịnaya obodo Ihe Owuwu 1 osote prọfesọ 1 Iji bụrụ onye prọfesọ na-arụ ọrụ n'ihe banyere injinịa. Inwe ihe omumu banyere ihe eji akpo fiber eme ka ihe di nma.
Ngalaba nke Injinia Ngalaba nke injinịa n'ibu 1 Dr. Nkụzi. otu 5 Nzere Master na PhD na injinia. Inwe akwukwo banyere ihe omimi nke okpukpu.
Ikike nke Sayensị Ahụike Oriri na erimeri Usoro Nutrition mkpokọta 1 Dọkịta nke ngalaba 4 Inwe doctorate na ngalaba physiology nke Ngalaba Nlere na ịrụ ọrụ na nsị anụ arụ na mmebi dị iche iche n'ihi inductions ọgwụ.
Ikike nke Sayensị Ahụike Oriri na erimeri Oriri ime obodo 1 Dọkịta nke ngalaba 4 Mmepụta osisi ọgwụ ndị na-eju afọ site na usoro anụ ahụ na akụrụngwa antioxidant ha.
Faculty nwa ara na- Nọọsụ Ahụike Ọha 1 osote prọfesọ 1 Inwe ihe omumu banyere hydatid cyst na ahuike oha.
Ikike nke Sayensị Ahụike nwa ara na- Ọrụ Nọọsụ 1 Dr. Nkụzi. otu 5 Gụsịrị akwụkwọ site na Ngalaba Nọọsụ wee mechaa doctorate na ngalaba ndị nọọsụ. Ihe nlere nke oma.
Ikike nke Sayensị Ahụike Audiology Audiology 1 Dr. Nkụzi. otu 4 Pụrụ iche na imi ntị na mpaghara akpịrị na nyocha ihu nwa amụrụ ọhụrụ.
Lọ akwụkwọ aka Ọrụ Ahụike na usoro dibịa Anya 1 Dr. Nkụzi.
otu 4 Inwe nzere nke PhD na physics.
Lọ akwụkwọ Vocational of Health Services Ọrụ Ahụike na usoro Usoro Nyocha Ahụike 1 Dr. Nkụzi. otu 4 Inwe nzere nke PhD na physics nuklia ma gha aru oru na agha agha.
Vlọ akwụkwọ ọrụ aka ọrụ Hotel, Restauranlọ oriri na ọtụ andụ na ọrụ nri Achịcha achịcha na achịcha 1 Dr. Nkụzi. otu 4 Ph.D. na ngalaba ọcha ọcha / ngalaba.
Oclọ akwụkwọ aka aka nka na nka na ụzụ Igwe eji igwe na teknụzụ igwe Njikwa Ogo Nrụpụta 1 Dr. Nkụzi. otu 4 Inwe PhD na Engineering Industrial na ịrụ ọrụ na ngalaba ịzụta omume na azụmaahịa elektrọnik.
Ngalaba nke Medicine Sciences Medical Ahụike Anesthesiology na Reanimation 1 osote prọfesọ 1 Turkish Anesthesiology na Reanimation Association na European Association of Anesthesiology (ESA) natara asambodo asambodo ahụ. Iji mụọ nsonaazụ nke usoro ọgwụgwọ izizi dị iche iche na nrụgide intraocular.
Ngalaba nke Medicine Sciences Medical Ahụike Oria na aru oria 1 Dr. Nkụzi. otu 5 Iji bụrụ ọkaibe na Orthopedics na Traumatology na ịrụ ọrụ na ndọtị nkwonkwo na-ejikọtaghị na ọgbụgba.
Ngalaba nke Medicine Sciences Medical Ahụike urology 1 Dr. Nkụzi. otu 5 Expgwọ ọrịa ọgwụ gbasara ureteral.
Ulo akwukwo nke sayensi Mgbasa Ọhụụ Mgbasa Ọhụụ 1 Dr. Nkụzi. otu 4 Ph.D. na redio, televishọn na sinima. Inwe ahụmịhe mmepụta ihe gbasara sinima, ihe nkiri na ihe nkiri.
Lọ akwụkwọ Vocational of Health Services Ọrụ Ahụike na usoro Nkụnwụ 1 Dr. Nkụzi. otu 5 Studymụta nsonaazụ mkpụrụ ndụ ihe nketa / protein na -agasị akwara nkụ na-akpata nchekasị.
1 - 657 Iwu Nke Mba Ndị Ọrụ 48''den iji gboo ọnọdụ izugbe,
2 - Mahadum anyị http://www.kmu.edu.tr Mgbe ha tinyechara akwụkwọ anamachọihe ya n'ụdị elektrọnik dị na adreesị, ha na-etinye akwụkwọ na mbipụta nke akwụkwọ achọrọ (Arụ Ọrụ, Ntinye, CV na Ndepụta Ọmụmụ na Ihe Nchịkwa),
3 - Ọnọdụ ha dabara na Ntụziaka Ntụle Değerlendirme Banyere itinye, nkwalite na ntinye aka na Karamanoğlu Mehmetbey University Mmụta,,
4 - 2547 (anọ) nke akwụkwọ sayensị na mbipụta nke ndị na-achọ akwụkwọ ga-etinye n'ọrụ ndị ọrụ dị ka isiokwu 23 nke Iwu gụrụ 4, na mgbakwunye na arịrịọ ha na-egosi asụsụ ala ọzọ, maliteghachi, agụmakwụkwọ gụsịrị akwụkwọ, gụsịrị akwụkwọ, asambodo doctorate, ndepụta mbipụta yana YDS, ÜDS ma ọ bụ KPDS nsonaazụ nsonaazụ, foto paspọtụ abụọ, na ndị rụrụ ọrụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ ugbu a na ụlọ ọrụ ọha (ewezuga ndị na-arụ ọrụ na Mahadum anyị) ga-enyefe akwụkwọ ọrụ ahụ na nkeji ndị metụtara ya na onye ma ọ bụ site na akwụkwọ ozi.
5 - ndị prọfesọ na-akpakọrịta bụ maka ọnọdụ na-adịgide adịgide ma gụnye 2547 (anọ) mbipụta nke ọrụ sayensị na mbipụta nke ndị na-eme ntuli aka nke Ọzụzụ Ndị Mmekọ na-ezukọ ọnọdụ ekwuputara na Article 24 nke Iwu Nke 4, na mgbakwunye na arịrịọ ha na-egosi ngalaba, agụmakwụkwọ, gụsịrị akwụkwọ, doctorate. asambodo, asambodo mmezu nke prọfesọ, ndepụta mbipụta, foto paspọtụ abụọ na akwụkwọ ọrụ nke ndị rụworo ọrụ ma ọ bụ ndị na-arụ ọrụ ugbu a na ụlọ ọrụ ọha (ewezuga ndị na-arụ ọrụ na Mahadum anyị) ka achọrọ itinye ha n'onwe ha ma ọ bụ site na posta Onye Ọrụ nke Rectorate.
6 - ndị ọrụ prọfesọ bụ maka ọnọdụ na-adịgide adịgide ma tinye 2547 (isii) mbipụta nke ọrụ sayensị na mbipụta nke ndị prọfesọ ahụ na-emezu ihe ekwuputara na ederede 26 nke Iwu gụọ 6, na mgbakwunye na arịrịọ ha na-egosi ngalaba ahụ na ọrụ nyocha bụ isi. , akwukwo nna ukwu, akwukwo doctorate, akwukwo onye nkuzi, onye ode akwukwo, ihe ndi ichoro, ya na oru nyocha ya site na itinye Rectorate Onye oru ndi mmadu ma obu leta.
A choro ndi nwere mmanye iru oru inye ha akwukwo ndi ozo banyere di ha ma obu ihe ike ha achoputara na paragraf 2547 nke Article 35 nke Iwu 3.
Oge itinye akwụkwọ bụ njedebe nke ụbọchị ọrụ n’ụbọchị nke iri na ise nke mbipụta nke ọkwa na ọkwa Gazette. Ọ bụrụ na ụbọchị nke iri na ise dabara na ngwụsị izu na / ma ọ bụ ezumike ọha, ụbọchị na-esochi ga-abụ njedebe nke ụbọchị ọrụ na oge ngwụcha. www.kmu.edu.t bụ ga-ekwuwapụta na. Agaghị anabata ngwa ndị emebeghị n'ime usoro iheomume na izipu ozi.
Onweghi onye otu ndi otu Dokita nwere ndi puru itinye ihe na ntinye aka nke 2547 nke ekwuru na 38.
A na-akpọsa ya.